Home Wararka Maanta Abiy Axmad oo casuumaad u fidiyay Laba kamid ah madaxda maamul Goboleedyada...
Abiy Axmad oo casuumaad u fidiyay Laba kamid ah madaxda maamul Goboleedyada dalka
Xogo diblumaasiyadeed ayaa sheegaya in Itoobiya ay casuumaad rasmi oo ay ku booqanayan Addis Ababa u dirtay Madaxweynayaasha labo Maamul goboleed oo ka mid ah Dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka.
Sida ay caddeynayaan warar hor-dhac ah, Itoobiya waxay ay si dhab ah dib ugu soo noolaysay siyaasaddeedii ay tobannaanka sano kula macaamileysay hoggaamiyayaasha maamullada, waxayna casuumaadda Xukuumadda Abiy soo baxday xilli Farmaajo ku sugan yahay Addis Ababa.
Warbixinta kuma cadda magacyada madaxda looga wacay caasimadda Itoobiya, hayeeshee, hoggaamiyaha Puntland Siciid Deni, oo ka mid ah musharixiinta xilka Madaxweynaha Soomaaliya, ayaa la rumeysan yahay inuu ku jiro, labada casuuman.
Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Madoobe, oo hore xiriir fiican ula lahaa Addis Ababa, ka hor imaanshiyihii Abiy Axmed, ayaa sidoo kale, la aaminsan yahay inuu ku jiro madaxda la casuumay, xilli ay xusid mudan tahay in Deni iyo Madoobe, laf-dhuun gashay ku ahaayeen maamulka Farmaajo.
Labadaan hoggaamiye, Deni iyo Madoobe, waxa ay dhawaan ka soo laabteen dalka Isku-tagga Imaaraadka Carabta, wax yar ka hor inta uusan Dubai booqasho ku tagin RW Itoobiya Abiy Axmed, isla todobaadka uu dalkaas u safray Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Imaaraadku, waxa ay saameyn xooggan ku leeyihiin siyaasadda geeska Afrika, waxa ay si buuxda isku garab taageen maamulka Abiy, xilli uu u baahnaa taageero caalami ah, kadib dagaal kharaar oo uu kala kulmay TPLF, taas oo UAE iyo Itoobiya dhex-dhigtay isku soo dhawaansho xidid adag.
Imaaraadku, wuxuu si adag kaga soo hor jeedaa in Farmaajo ku soo laabto xilka ugu sarreeya Soomaaliya, waxaana la fahansan yahay inuu ka shaqeynayo kala goynta Abiy iyo Farmaajo, waana sababta Itoobiya u soo noolaysay siyaasaddeedii ku wajahneyd la macaamilka maamullada.
MW hore ee Soomaaliya Farmajo, ayaa hore loogu eedeeyay inuu xukunka dalka hoos geeyay maamulka Addis Ababa, hayeeshee, wuxuu isagu ku faanay inuu soo xiray kannaalkii Madaxda DXDF, uga furnaa Itoobiya, kadib is-af-garad ku dhisnaa dano gaar ah oo dhex maray isaga iyo Abiy.
Farmaajo, oo kursiga MW Soomaaliya ku helay waddaniyad aan afka baarkiisa dhaafsaneyn, oo ay ugu horreyso nacaybka Itoobiya, ayaa kobo-qaad u noqday Addis Ababa, waxaana la xasuustaa inuu u gacan galaiyay Cabdikariin Qalbi-dhaxag, isla-markaana uu ONLF ku daray liiska Argagixisada.
Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda, Axmed Ciise Cawad, ayaa shaqada laga raacdeyay kadib markii uu colaadda Tigrayga uga hadlay qaab aysan Addis jecleysan, halka Wasiirkii ka danbeeyay Maxamed Cabdirisaaq uu xilkiisa ku waayay ka shaqeynta cilaaqaadka Masar iyo Soomaaliya, oo Itoobiya aysan raalli ka ahayn.
Caddeymaha muujinaya in Abiy Axmed dhabarka u jeediyay Kooxda Farmaajo, waxaa ka mid ah, inuu u codeeyay una ololeeyay dalka Jabuuti, Xilli Soomaaliya iyo Jabuuti, ku loollamyeen Xubinnimada Golaha Ammaanka iyo Nabadda ee Midowga Afrika, Saddex cisho ka hor, kursigaas Jabuuti ayaa hanatay.